अमेरिकी आक्रमणमा इरानका सेनाको विशेष दस्ताका प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या पश्चात् दुवै देशबीच तनाव बढेको छ । यस्तोमा परमाणु सम्झौता रद्द हुनुको नतिजा के हुनसक्छ ? यसको लागि सर्वप्रथम परमाणु सम्झौतामा के थियो भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
इरानले सधैँ आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण दाबी गर्दै आएको थियो । तर पश्चिमा देशहरू इरानको परमाणु कार्यक्रमप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्दथे । इरान परमाणु बमको विकासमा तल्लीन रहेको उनीहरूको बुझाई थियो ।
यसकारण संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्, अमेरिका र युरोपियन युनियनले सन् २०१० मा इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् २०१५ मा इरानले ६ देशहरूसँग सम्झौता गरेको थियो ।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित गरेको थियो । त्यसको बदलामा इरानलाई प्रतिबन्धबाट राहत मिलेको थियो ।
सम्झौताअनुसार इरानले युरेनियम संवद्र्धन कार्यक्रम रोक्नुपर्‍यो । युरेनियम संवद्र्धन ‘रियाक्टर’ इन्धन बनाउनको लागि प्रयोग हुन्थ्यो । परमाणु हतियार बनाउन समेत यसको प्रयोग हुने गर्दथ्यो ।
सम्झौता कसरी टुट्यो ?
सबैभन्दा पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ को मईमा सम्झौता रद्द गर्दै इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानसँग नयाँ सम्झौता होस् भन्ने ट्रम्प चाहन्थे ।
ट्रम्पले इरानसँग इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम र क्षेत्रिय संघर्षमा उसको सहभागिता रोक्ने प्रावधान सहितको नयाँ सम्झौता चाहेका थिए । सो कुरा इरानले अस्वीकार गरेको थियो ।
यसले गर्दा इरानको मुद्रास्फिती बढ्यो र इरानको मुद्रामा गिरावट आयो । सन् २०१९ को मईमा इरानमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कडा बनाइयो । त्यसपछि इरान समेत सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धताहरूबाट पछि हट्न थाल्यो ।
ट्रम्पको शासनकालमा इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो । र जनवरी २०२० मा यो सम्झौता पुरै टुट्न पुग्यो । अमेरिकाले जनवरी ३ मा इराकी विमानस्थल नजिकै इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या गर्‍यो । त्यसपछि जनवरी ५ मा इरानले परमाणु सम्झौता नमान्ने घोषणा ग¥यो ।
इरानले अब सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुनै पनि प्रावधानहरू नमान्ने बताएको छ । सम्झौतामा युरेनियम संवद्र्धन कार्यक्रमलाई सीमित गर्ने प्रावधान समेत थियो ।
यद्यपि इरानले आफू परमाणु सम्झौताबाट पूर्णतया पछि हटे–नहटेको स्पष्ट रुपमा जनाएको छैन । तर इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु निगरानी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेन्सी (आईएईए)सँग सहयोग र सहकार्य जारी राख्ने बताएको छ ।
जुन सम्झौता भएको थियो, त्यसअन्तर्गत एउटा युद्धलाई रोकिएको थियो । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनपूर्व इरानको परमाणु कार्यक्रमका कारण इजरायलले हमला गर्नसक्ने सम्भावना थियो ।
सम्झौता नमान्ने इरानको घोषणाले के होला ?
इरानले अब आफूले यूरेनियम संवद्र्धन कार्यक्रमलाई पुनः सुचारु गर्ने बताएको छ । यससँगै इरानले कति दिनमा न्युक्लियर बम बनाउन सक्ला भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
न्युक्लियर सम्झौतामा इरानलाई न्युक्लियर संवद्र्धनको सीमा ३ दशमलव ६७ प्रतिशत तोकिएको थियो । अमेरिकाका अनुसार जुलाई २०१५ भन्दा अघि नै इरानसँग ठूलो मात्रा संवद्र्धन गरिएको युरेनियम थियो ।
यसका साथै इरानसँग २० हजार सेन्ट्रिफ्युजेज रहेको बताइन्छ । यसले दशवटा न्युक्लियर बम बनाउन सकिने आँकलन गरिएको छ । त्यतिबेला अमेरिकी विज्ञहरू इरानले चाहेको खण्डमा २–३ महिनाभित्रै त्यस्तो बम बनाउन सक्ने बताउँथे ।
हालको इरानको क्षमताअनुसार उसले चाहेमा १ वर्षभित्र न्युक्लियर बम बनाउन सक्ने बताइन्छ । यदि उसले युरेनियम संवद्र्धन २० प्रतिशतको दरले बढाएमा त्यो भन्दा कम समयमा परमाणु बम बनाउन सक्दछ ।
के इरानले परमाणु हमला गर्न सक्छ ?
इरानले जहिल्यै आफूले परमाणु हतियार विकासको लागि कोशिस नगरेको बताउँदै आएको छ । आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई उसले शान्तिपूर्ण बताउँदै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसमा विश्वास गरेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेन्सीसँग त इरानले सन् २००३ भन्दा पहिले न्यूक्लियर एक्सप्लोजिभ डिभाइस निर्माण गतिविधि गरिरहेको प्रमाण नै छ । यस्तो गतिविधि सन् २००९ सम्म नै चलेको थियो ।
हाल इरानले मध्यपूर्वका अलावा देशभित्र नै अनेक चुनौतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवसथामा इरान पूर्णरुपमा युद्धमा उत्रिन्छ कि उत्रिदैँन भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।